Mbola tsy fantatra izay homena an'i Reyes? Miaraka amin'ny fitaovana elektronika ho marina foana ianao | Androidsis
Ignacio Sala | | Fitaovana Android, SmartWatch, Takelaka Android
Afaka roa andro dia ho tonga ny Magy Telo, raha sanatria aorian'ny alin'ny Taom-baovao dia mbola tsy takatrao ny andro nahatongavanao. Raha mbola tsy nividy fanomezana ianao Ho an'ireo akaiky anao dia tsy mila mihazakazaka mankamin'ny magazay ianao vao hividy ilay zavatra voalohany hitanao na hanao zavatra mampihomehy anao, satria azo antoka fa ho ratsy tarehy ianao.
Fitaovana elektronika ankehitriny, no filaharan'ny andro ary ny fanomezana iray dia hahatonga anao ho tsara foana. Smartphone, takelaka, fehin-tànana mifampitohy, fantsom-pandrefesana, mpanadio fantsona robot, fitaovana marani-tsaina ... Ao Amazon dia manana fitaovana elektronika marobe hividianana sy horaisina alohan'ny Fetin'ny Mpanjaka telo.
Fa koa, raha misy fetran'ny fivezivezena any amin'ny faritany sasany dia tsy afaka mihetsika ianao, Amazon dia afaka mandefa azy mivantana Ho an'ny adiresin'ny namanao na havanao, araraoty ity safidy natolotry ny orinasa Jeff Bezos ity ary tampoka izany, mandoa vola bebe kokoa mba hamonosana azy ary hatolotra ho fanomezana.
1 Fitaovana mifandray
2 Fehin-tànana manisa
4 finday avo lenta
Ireo mpandahateny mahay Amazon dia ny dingana voalohany hidirana amin'ny Internet amin'ny zavatra, satria amin'ny baiko am-peo tsotra dia afaka mandrehitra jiro isika, mamono fatana, mametraka sarimihetsika amin'ny fahitalavitra, manomboka ny milina fanasan-damba ... ankoatry ny famahana ny fisalasalana tonga ao an-tsainao.
Raha tsy azonao antoka raha tena hahazo tombony betsaka amin'izany ianao dia afaka misafidy ny fototra indrindra, ny Amazon Echo Dot Generation faha-3, fitaovana azo vidiana 24,99 euro, midina amin'ny 49,99 euro mahazatra.
Raha mila izany amin'ny efijery ianao, Manana ny Echo Show 5-inch amin'ny vidin'ny 44,99 euro (ambany avy amin'ny 89,99 euro) na ny Echo Show 8-inch amin'ny vidin'ny 64,99 euro (izay ny vidiny mahazatra dia 129,99 euro).
Raha tsy Smart ny fahitalavitra anao na eo aza ny fampidirana fampiharana sy serivisy, tsy miavaka amin'ny faharanitan-tsainy, azonao atao ny misafidy ny Fire TV Stick Lite amin'ny vidiny 24,99 euro na ho Fire TV Stick mitentina 29,99 euro. Noho ireo fitaovana ireo dia afaka mangataka amin'i Alexa izahay hilalao sarimihetsika na andian-tsarimihetsika amin'ny fahitalavitra, Amazon Prime ...
Raha miresaka momba ny fametahana haba amin'ny tanana isika dia tsy maintsy miresaka momba ny Xiaomi Mi Band 5, lFanatanjahan-tena famarotana be mpividy indrindra eran-tany na amin'ny vidiny ambany na amin'ny tombony be dia be omeny antsika. ny Mi Band5 azo alaina 29 euro, fa tsy izy irery.
Safidy iray hafa mahaliana dia ny Tarika 4C, koa avy amin'i Xiaomi, samy manolotra anay a fampisehoana loko miaraka amin'ny fifehezana ny tahan'ny fo, ny fanaraha-maso ny torimaso ary ny fanatanjahantena ... Hajao ny Band 5, miaraka amn'ny maso tahan'ny fo sy ny metatra oxygen an'ny rà amin'ny $ 33,99 dia safidy iray hafa dinihina.
Na dia marina aza fa matetika izahay dia mamporisika ireo fitaovana aziatika mora vidy avy amin'ny marika izay tsy fantatry ny ray aman-dreniny ihany, ny Tsy misy vokatra. izay manana naoty mihoatra ny 8000 miaraka amin'ny salan'isa 4,5 avy amin'ny kintana 5.
Ity famantaranandro maranitra ity, t40,99 euro ny vidiny mamela antsika hanara-maso torimaso, manisa dingana, mampiditra maso tahan'ny fo, tsy mahazaka splash ... ary misy amin'ny loko isan-karazany: mainty, volondavenona, maitso, mavokely ary manga volamena.
Raha mitady kalitao sy fiasa maro be ianao, ny vahaolana atolotry Samsung antsika miaraka amin'ny Galaxy Watch Active 2 amin'ny vidiny 239 euro na ny Galaxy Watch 3 amin'ny vidiny 399 euro, dia safidy roa hodinihina.
Manolotra antsika i Huawei 94 euro fotsiny el Huawei Watch GT Fashion, fitaovana iray misy GPS, tahan'ny fo ary fanaraha-maso ny torimaso. Ny taranaka faharoa amin'ity modely ity, ny Jereo ny GT2 Sport, azo vidiana amin'ny 129 euro, dia mifantoka bebe kokoa amin'ireo atleta ary manome antsika asa mitovy amin'ny an'ny GT Fashion fa miaraka amina maody fitehirizana angovo ahafahantsika mandeha 2 herinandro nefa tsy andoavana izany.
Eto ny zava-drehetra miankina amin'ny teti-bolanao, satria afaka hitantsika amin'ny finday manodidina ny 1000 euro ka hatramin'ny mobiles izay manomboka amin'ny 100 euro. Ato ambany atoroko anao ny tolotra tsara indrindra avy amin'ireo mpanamboatra finday avo lenta.
Xiaomi Mi Note 10 Lite amin'ny 331 euro. Efijery 6,47-inch, RAM 6 GB, fitehirizana 64 GB, Android 10, bateria 5.206 mAh, famahanana haingana, Snapdragon 730 G, fakantsary 4 aoriana ...
realme 7 Pro amin'ny vidiny 274 euro. Modely misy efijery 6,4-inch, RAM 8 GB, fitehirizana 128 GB, efijery SuperAMOLED Full HD +, Android 10, 64 MP sensor lehibe indrindra novokarin'i Sony.
Oppo Find X2 NEO 5G amin'ny vidiny 495 euro. Ity efijery ity dia manana efijery 6,5-inch, mifanaraka amin'ny tambajotra 5G, manana RAM 12 GB ary fitehirizana 256 GB, fakan-tsary efatra aoriana, bateria Android 10, 4.000 mAh ...
Galaxy Note 20 5G amin'ny vidiny 778 euro. Ity maodely ity, misy amin'ny kinova 256 GB, manome antsika zana-tsokajy 3x hybrid, efijery Super AMOLED + 6,7-inch, batterie 4.300 mAh, S Pen ... iray amin'ireo finday avo lenta tsara indrindra eny an-tsena izay mifanaraka amin'ny stylus koa.
Motorola G9 Plus amin'ny vidin'ny 199 euro. Raha tsy te handany vola be ianao, ity modely Motorola misy efijery 6,8-inch ity ary bateria 5.000 mAh dia safidy tena mahaliana, satria ao koa ny RAM 4 GB sy fitehirizana 128 GB.
La Huawei Mediapad T5, miaraka amin'ny Efijery 10,5-inch, RAM 2 GB ary tahiry 32 GB Safidy mahaliana ny mandany atiny multimedia ao an-trano amin'ny vidiny 139 euro. Ity modely ity dia misy ihany koa amin'ny kinova misy RAM 4 GB sy fitehirizana 64 GB ho an'ny 179 euro, safidy tsara kokoa raha te-hahazo tombony betsaka amin'ny takelaka isika fa tsy handany afa-po fotsiny.
Manolotra antsika i Lenovo M10, takelaka iray ho an'ny 251 euro, manolotra antsika a Efijery 10.3 santimetatra, RAM 4 GB, fitehirizana 64 GB (azo ovaina amin'ny karatra microSD), fifandraisana Android 9 sy Wi-Fi ary LTE. ny Galaxy Tab A 7 avy any Samsung, miaraka amin'ny 3 GB an'ny RA ary tahiry 32 GB ho an'ny 259 euro, safidy mety izany raha toa ka efa manana finday avy amin'ity orinasa ity ianao noho ny fampidirana ny tontolo iainana azy.
Raha te hampiasa S Pen amin'ny takelakao ianao dia manolotra anay ny Samsung ny Galaxy Tab S6 Lite, takelaka 10-inch misy RAM 4 GB ary tahiry 64 GB ho an'ny 399 euro. Safidy iray hafa, lafo kokoa nefa miaraka amin'ireo endri-javatra tsara indrindra eny an-tsena dia hita ao amin'ny Galaxy Tab S7, takelaka 11-inch manana fitahirizana 128/256 GB, miaraka amin'ny S Pen ho an'ny 599 euro ho an'ny kinova 128 GB and of 699 euro ho an'ny kinova 256 GB.
Raha tsy mampaninona anao ny serivisy Google dia tsy misy amin'ny takelaka. MediaPad Pro de 10.8 santimetatra, RAM 6 GB ary tahiry 128 GB ho an'ny 479 euro ihany, dia safidy iray hodinihina. Amin'izao fotoana izao, ny serivisy Google dia azo apetraka tsy misy olana, koa raha teorika, raha miankina amin'ny Google ianao dia afaka manohy manao an'io takelaka io.
Raha mitady takelaka lafo vidy ianao mankafy streaming video indrindra na mamaky boky, ny Fire HD 8 avy any Amazon amin'ny vidin'ny 99,99 euro Izy io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny kinova fitehirizana 32 GB. Raha lavo io, ny kinova 64 GB dia mitentina 129,99 euro.
Iray amin'ireo Ny mpanadio banga robot mpivarotra be indrindra ao Amazon miaraka amin'ny naoty efa ho 10.000 no Cecotec Series 1090, maodely mifanaraka amin'ny Alexa azo alaina 145 euro fotsiny. Raha mila izany isika ankoatry ny mamafa, dia esorintsika koa ny gorodona ananantsika Mamorona IKOH amin'ny vidin'ny 199 euro.
Raha tianao izany miditra amin'ny tontolon'ny sary azonao atao izany amin'ny Nikon D3500 amin'ny vidiny 539 euro na miaraka amin'ny Canon EOS 2000D amin'ny vidiny 429 euro. . Safidy iray hafa mahaliana dia ny Canon PowerShot G7X amin'ny vidiny 492 euro, na ilay Canon 800D ho an'ny 731 euro.
La karatra fitadidiana 64GB SanDisk dia misy amin'ny 9,99 euro ary ny kinovan'ny 128 GB ho an'ny 22,99 euro. Raha miresaka momba ny sary isika dia tsy maintsy miresaka a Tsy misy vokatra. miaraka amin'ny tripod ho an'ny finday ho an'ny 23,99 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Mbola tsy fantatra izay homena an'i Reyes? Miaraka amin'ny fitaovana elektronika ho marina foana ianao
Ahoana ny fomba hampihenana ny efijery hampiasana telefaona amin'ny tanana iray ao MIUI
Ahoana ny fahafantarana ny fifamoivoizan'ny zotra iray ao amin'ny Google Maps